Izinsiza kusebenza Icubungula - K-Tek Machining Co., Ltd.
I-K-Tek machining yinkampani ehamba phambili yobunjiniyela benkontileka, ekhiqiza izingxenye ezibucayi zokunemba & imihlangano ebiza izindinganiso zekhwalithi, ezimbonini eziningi ezinegugu lokwenza kahle. Sisungule idumela elingenakulinganiswa lokukhiqizwa kwekhwalithi ephezulu yokusebenza, ukuqamba okuphefumulelwe, izixazululo ezingabizi kakhulu, kanye nensizakalo yamakhasimende. Sihlanganisa onjiniyela abanamakhono kakhulu nabanolwazi ngezinto zekhwalithi, izinqubo eziqinisekisiwe zomkhakha, amasistimu wokuphatha anciphile, kanye nemishini yobuchwepheshe besimanje.
KwaK-Tek machining inhloso yethu ukusiza amaklayenti ethu akhule. Lokhu sikwenza ngokwazi ukuthi yonke ingxenye esiyikhiqizayo isezingeni eliphakeme kakhulu elitholakala emakethe namuhla. Ngemuva kwakho konke, ufuna ukuthi umkhiqizo wakho wokugcina uhambe phambili emakethe, akunjalo? Xhumana nathi ukubona ukuthi yini esingayenza ukuze wenze kangcono nakakhulu. "Kubalulekile ebhizinisini lethu ukuthi sibe nabaphakeli abathembekile, abathembekile nabanolwazi abasisekelayo thina namakhasimende ethu."
Inkampani yethu ingenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, okwamanje sinabasebenzi abangama-200. Umkhiqizo wethu uthunyelwa eJapan ngama-20%, ama-60% athunyelwe eYurophu naseMelika, singakunikeza ikhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana. Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy, singanikeza nokwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende:
• Zinc Plating (Mnyama / Umnqumo / Luhlaza /……)
Amageji wezintambo / amaringi
Uhlelo Lokulinganisa Oluqondile
Siyaqiniseka ukuthi ithimba lethu linamakhono namakhono okuhlola nokuhlola zonke izici zokwenziwa kobunjiniyela bezinto ukuqinisekisa ukuthi sigcina amazinga aphezulu njengokufunwa ngamakhasimende ethu. Umnyango wokuhlola nokuhlola unezinto ezahlukahlukene zokulawula ikhwalithi nezindlela zokufeza lokhu futhi siyajabula ukubhekelela noma iyiphi indlela yokuhlola nokuhlola obona ukuthi iyadingeka.
Umgomo wethu: Ukuletha imikhiqizo efanelekayo nge-zero defect kuwo wonke amakhasimende ethu. Sihlose ukuhlangabezana nazo zonke izidingo zawo wonke amadizayini. Ukuletha lowo mgomo, inkampani yethu ye-CNC Machining eqhubekayo ithuthukisa ikhwalithi yazo zonke izinsizakalo zethu kumakhasimende amanje nawesikhathi esizayo. Sisebenzisa imithombo yethu ebaluleke kakhulu-abantu bethu-ukuze baqonde futhi bathuthukise izinqubo zethu nsuku zonke.
I-CMM: Umshini wethu Wokulinganisa we-ZEISS ulawulwa yi-CNC futhi ithola ukuhlolwa kwayo ngokwenza ukuxhumana nengxenye kusetshenziswa iphenyi yokuthinta .Lolu hlelo lusebenza kahle njalo lapho kubhekwa izingxenye zelager nezici eziyinkimbinkimbi ngaphakathi kwezingxenye.